तापसी पन्नु भन्छिन्ः मागी विवाह गर्ने साहसिक हुन्छन् तर मलाई जीवनमा त्यति जोखिम मोल्नु छैन । – Post Patrika
आमिर खान पछि अब अनिल कपूरको डिर्भाेस गर्ने पालो , घरमा श्रीमती हुदा हुदै ३० वर्ष कान्छी यी अभिनेत्री लाई औधी मन पराउँछन्
यिनै हुन् भारतीय युवतिसंग बिहे गरेर छोरी जन्माएपछि फरार भएका बागलुङका प्रकाश
साधुले महिलामाथि गरे यस्तो हर्कत, भिडियो बाहिरियो (भिडियो सहित)
गुगल अर्थबाट देखियो सबैको होश उडाउने तस्विर, यहाँ तपाइले के देख्नुभयो ?
बलिउड स्टार : बावु-छोरी देखि दिदि-भाई सम्मका लाजमर्दा अवस्था, छोरी नभए बिहे नै गर्थे जस्ता बयान !
प्रियंका–निकले छोरीका लागि किने अमेरिकाकै महंगो घर, बच्चा मैत्री बनाउँन २० लाख डलर खर्चे
कलेज आउँन दिनदिनै गाडी फेर्ने धनी परिवारकी गर्लफ्रेण्डसँग कपिल शर्माको चक्कर
२२ महिनाका यी बालकले २ लाख ४० हजारको सपिङ्ग गरे, सत्य थाहा पाउँदा आमा मधु र बाबु प्रमोद हैरान !
तस्विरमा लुकेको सर्प पत्ता लगाउन तपाईसँग मात्र ५ मिनेट छ, आउँनेछ जीवनमा चमत्कार
७० बर्षसम्म एकै ठाउँ जागिर, अनौठो त यो छ ७० बर्षसम्म एकदिनपनि लिएनन् विदा
मुख्य पृष्ठ /News/तापसी पन्नु भन्छिन्ः मागी विवाह गर्ने साहसिक हुन्छन् तर मलाई जीवनमा त्यति जोखिम मोल्नु छैन ।
तापसी पन्नु भन्छिन्ः मागी विवाह गर्ने साहसिक हुन्छन् तर मलाई जीवनमा त्यति जोखिम मोल्नु छैन ।
काठमाण्डौं । बलिउड अभिनेत्री तापसी पन्नुद्धारा अभिनीत चलचित्र ‘हसिन दिलरुबा’ रिलिज भएको छ । जुलाई २ यो फिल्म प्रदर्शनमा आएको हो । यस चलचित्रमा मागी विवाह अघि र पछिका घटना क्रमलाई जोडेर एकदमै रोचक ढङ्गले देखाउन खोजिएको छ ।
तापसी पन्नुको सँगै यस फिल्ममा विक्रान्त मेस्सी र हर्षवर्द्धन राणेको मुख्य भूमिका रहेको छ भने चलचित्रलाई विलिन मैथ्यूले निर्देशन गरेका छन् भने आनन्द एल रायले निर्माण गरेका हुन् ।
चलचित्रमा मागी विवाह गरेको भूमिका निभाएकी तापसीलाई वास्तविक जीवनमा मागी विवाह कस्तो लाग्छ भन्ने सवालमा उनले आफ्नो राय दिएकी छिन् ।
बिबिसीले उनी संग गरेको कुराकानीको क्रममा उनले मागी बिबाह गर्नेहरु एकदमै साहसी हुने गरेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । नजानेको मान्छे संग सम्बन्ध गाँस्नु कुनै चानचुने कुरा नभएको बताउँदै जसलाई साहस देखाउने धेरै सोख छ, उनीहरुले मात्रै मागी विवाह गर्ने गरेको उनको दाबी छ । तर उनको आफ्नै जिवनमा भने उनलाई मागि बिबाह गर्ने हिम्मत छैन ।
उनि भन्छिन् -‘मलाई साहसिक यात्रा, खेल मनपर्छ तर म जीवनसँग त्यति जोखिम मोल्न सक्दिन । उनले आफु संग जिवन बिताउने ब्यक्तिलाई नजिकबाट चिने पछि मात्र निर्णय लिने बताएकी छिन् । उनले आफु संग जोडिने मान्छेसँग जीवन बिताउन सक्छु कि सक्दिन भन्ने बिश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछिन् । चिन्दै नचिनी जिन्दगी संग संझौता गर्न नसक्ने उनले बताईन् ।
लागूऔषध कसूरमा र्‍यापर ‘लाउरे’ पोखराबाट पक्राउ
टाउकाको अपरेशन गर्दा लाइन गएपछि…
अर्काको नाममा रहेको सिमकार्ड चलाउनुहुन्छ ? आफ्नो नाममा यसरी नामसारी गर्नुहोस्
गृह मन्त्रालयको निर्देशन : मानिसहरुलाई घरबाहिर निस्कन नदिनू